थप ५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी, संक्रमितको संख्या २१ सय नाघ्यो — Imandarmedia.com
१माओवादी केन्द्रको बैठक सकियो, ओली सरकारलाई दिएको समर्थनबारे के भयो निर्णय ?
२किनआफ्नै कार्यालयभित्रै कार्यालय सहयोगीले गर्यआत्महत्या ?
३नेदरल्याण्डलाई दियो नेपालले २०७ रनको विशाल लक्ष्य
४फेरी बिहिबारदेखि लकडाउन सुरु हुँदै नेपलामा,अब के हुन्छ ?
५नेप्से परिसूचक स्थिर, कारोबार रकम घट्यो
७किन पर्यो,पार्टी प्यालेसलाई मुख्य सिजनमै दोस्रो धक्का
९यी २७ सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको तयारी
१०कसलाई आयो लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने अफर ?
११नेपालका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह दम्पतीलाई कोरोना संक्रमण
१२वर्तमान राजनीतिकबारे कस्तो कदम चाल्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली
थप ५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी, संक्रमितको संख्या २१ सय नाघ्यो
काठमाडौँ । मंगलबार साँझ झापामा थप ५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा परीक्षण गर्दा झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले निर्माण गरेको होल्डिङ एरियामा रहेका पाँच जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो ।
उनीहरु भारतबाट स्वदेश फर्किएकाहरु हुन् । संक्रमितमध्ये पाँचथरका १, ताप्लेजुङका तीन र झापाका १ जना रहेको गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भोलानाथ अधिकारीले जानकारी दिए । जेठ १३ गते गाउँपालिकाको होल्डिङ एरियामा आएकाहरुको १४ गते नमुना संकलन गरी विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको थियो । तर नमुना पठाएको ६ दिनपछि मंगलबार कोरोना परीक्षणको नतिजा आएको हो ।
रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि पाँचजनालाई विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको अधिकारीले जानकारी दिए । झापामा पाँच जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको संख्या १७२ पुगेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । संक्रमितमध्ये ४८ जना डिस्चार्ज भएका छन् । पाँचजना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ हजार १ सय ४ पुगेको छ ।